Fampiharana miharo fanamafisam-peo amin'ny rindrambaiko-HLQ manamafy heater
Fampiharana fanamafisam-peo amin'ny alàlan'ny fanodinana induction
Inona no atao hoe mihamafy?
Induction hardening dia karazana fitsaboana hafanana izay ampahan'ny metaly manana atiny karbaona ampy hafanaina eo amin'ny sehatry ny fampidirana ary avy eo mangatsiaka haingana. Izany dia mampitombo ny hamafin'ny sy ny mangirana amin'ny ampahany. Ny fanamafisana induction dia ahafahanao manana hafanana eo an-toerana amin'ny mari-pana efa voafaritra mialoha ary ahafahanao mifehy tsara ny fizotran'ny fanamafisana. Azo antoka araka izany ny famerenana ny dingana. Matetika, ny fanamafisana ny fampidirana dia ampiharina amin'ny ampahany vy izay mila manana fanoherana ambony akanjo, ary mitazona ny fananana mekanika miaraka aminy. Rehefa vita ny fizotran'ny fanamafisana ny induction, ny metaly vy dia tokony hovonoina anaty rano, solika na rivotra miovaova mba hahazoana fananana manokana amin'ny sosona amboniny.
Induction hardening dia fomba fanamafisana haingana sy mifantina ny tampon'ny ampahany vy. Ny coil varahina mitondra haavo mihoampampana dia apetraka eo akaikin'ny (tsy mikasika) ny ampahany. Ny hafanana dia miteraka amin'ny, ary manakaiky ny atin'ny eddy ankehitriny sy ny fatiantoka hysteresis. Ny quench, matetika miorina amin'ny rano miaraka amin'ny fanampiana toy ny polymer, dia entina mankany amin'ilay faritra na milentika ao anaty rano. Io dia manova ny rafitra ho martensite, izay mafy lavitra noho ny rafitra teo aloha.
Ny fitaovana fanamafisam-peo indostrialy malaza sy maoderina dia antsoina hoe scanner. Ny ampahany dia tazonina eo anelanelan'ny foibe, mihodina ary mandalo coil mandroso izay manome hafanana sy hamonoana. Ny quench dia alefa any ambanin'ny coil, ka ny faritra omena azy dia ampangatsiahina haingana aorian'ny fanamafisana. Ny haavon'ny herinaratra, ny fotoana iainana, ny tahan'ny scan (feed) ary ny fiovan'ny fizotrany hafa dia voafehin'ny solosaina tsara.
Ny fizotran'ny fanamafisana ny tranga ampiasaina amin'ny fampitomboana ny fanoherana, ny hamafin'ny atiny ary ny fiainam-paharerahana amin'ny alàlan'ny famoronana sosona amboniny mihamafy nefa mitazona mikraoba fototra tsy voakasik'izany.
Induction hardening dia ampiasaina hampitomboana ny toetra mekanika misy singa ferro amin'ny faritra manokana. Fampiharana mahazatra dia powertrain, fampiatoana, singa motera ary fitomboka. Ny fanamafisana induction dia tena tsara amin'ny fanamboarana ny tsy fahombiazan'ny fiantohana. Ny tombony voalohany dia ny fanatsarana ny tanjaka, ny havizanana ary ny fanoherana amin'ny akanjo amin'ny faritra iray raha tsy mila mamolavola ny singa.
Fomba sy indostria mety hahazo tombony amin'ny fanamafisana ny fampidirana:
Tube sy Sodina manamafy
Tombontsoa amin'ny fanamafisana induction:
Ankafizin'ny singa izay iharan'ny enta-mavesatra mavesatra. Ny induction dia manome hamafin'ny haavo avo lenta miaraka amina tranga lalina mahazaka enta-mavesatra be dia be. Ny tanjaky ny havizanana dia mitombo amin'ny alàlan'ny fampivelarana ny fotony malefaka voahodidin'ny sosona ivelany tena mafy. Ireto fananana ireto dia tsara ho an'ny ampahany izay miaina ny fizarana torsional sy ny velarana izay miaina ny herin'ny fiantraikany. Ny fanodinana induction dia tanterahina ampahany iray amin'ny fotoana iray ahafahana mihetsika tena azo vinavinaina isaky ny ampahany.
Fanaraha-maso mazava tsara ny mari-pana sy ny halalin'ny lalina
Fanafanana voafehy sy voafaritra
Mora tafiditra ao anatin'ny tsipika famokarana
Dingana haingana sy azo averina
Ny sangan'asa tsirairay dia azo hamafisina amin'ny alàlan'ny masontsivana haingo tsara
Dingana mahomby amin'ny angovo
Ireo singa vy sy vy tsy misy fangarony izay azo hamafisina amin'ny fampidirana:
Fasteners, flanges, gears, bearings, Tube, hazakazaka anatiny sy ivelany, crankshafts, camshafts, zioga, shafts drive, shaft output, spindles, torsion bar, peratra famonoana, tariby, valves, rock drills, sns.
Fanoherana fanoherana mihabe
Misy fifandraisana mivantana eo amin'ny hamafin'ny fihenan'ny akanjo. Ny fanoherana ny akanjo amin'ny ampahany dia mitombo be amin'ny fanamafisana ny fampidirana, amin'ny fiheverana fa ny toetran'ny fitaovana voalohany dia niraikitra, na notsaboina tamina toe-pahalemem-panahy.
Fampitomboana ny tanjaka sy ny havizanana noho ny adin-tsaina malefaka sy miorim-paka tafavoaka eo amin'ny endrika ivelany
Ny adin-tseranana mampiaiky (mazàna heverina ho toetra tsara) dia vokatry ny rafitra mihamafy eo akaikin'ny faritra misy azy io izay somary betsaka kokoa noho ny fotony sy ny rafitra teo aloha.
Ny ampahany dia mety ho tezitra aorian'ny Induction Hardening manitsy ny haavon'ny hamafiny, araka ny faniriana
Tahaka ny fizotran'ny dingana mamorona rafitra martensitika, ny famafana dia hampidina ny hamafin'ny fihenan'ny brittleness.
Tranga lalina miaraka amin'ny Core mafy
Ny halalin'ny tranga mahazatra dia .030 "- .120" izay lalindalina kokoa noho ny fizotrany toy ny carburizing, carbonitriding, ary endrika nitriding isan-karazany vita amin'ny maripana ambany-kritika. Ho an'ny tetikasa sasany toy ny axela, na ny ampahany izay mbola ilaina na dia lany aza ny fitaovana be dia be, mety ho hatramin'ny ½ santimetatra na lehibe kokoa ny halalin'ny tranga.
Fomba fanamafisana mifantina tsy mila masking
Ireo faritra misy fantsom-pandrefesana na fametahana milina dia mijanona ho malefaka - vitsy dia vitsy ny fizotran'ny fitsaboana hafanana afaka mahavita an'io.
Fanaparitahana kely indrindra
Ohatra: tsorakazo 1 "Ø x 40" ny halavany, izay misy diary roa misy elanelam-potoana, tsirairay avy 2 "lava mitaky fanohanan'ny fanoherana ny enta-mavesatra sy ny fitafiana. Ireo fanamafisana induction dia tanterahina amin'ireo sehatra ireo ihany, totalin'ny 4 ". Miaraka amin'ny fomba mahazatra (na raha mampiditra ny halavany manontolo amin'izany isika), dia mety hisy ny ady.
Mamela ny fampiasana Steels mora vidy toa ny 1045
Ny vy malaza indrindra ampiasaina amin'ny faritra ampidirina ho mafy dia 1045. mora vidy izy, mora vidy, ary noho ny atin'ny karbaona manana 0.45% anarana dia mety hamafisina amin'ny 58 HRC + izany. Izy io koa dia manana risika somary ambany noho ny fikapohana mandritra ny fitsaboana. Fitaovana malaza hafa amin'ity dingana ity ny 1141/1144, 4140, 4340, ETD150, ary ny vy isan-karazany.
Fepetran'ny fanamafisana ny induction
Mitaky Coil Induction sy Fitaovana mifandraika amin'ny Geometry an'ny Part
Koa satria ny halaviran'ny fitambaran-tsolika dia manasongadina ny fahombiazan'ny hafanana, ny haben'ny coil dia tsy maintsy voafidy tsara. Raha ny ankamaroan'ny mpitsabo dia manana firaketana coil tsotra handefasana endrika boribory toy ny shaft, pin, roller, sns., Ny tetikasa sasany dia mety mitaky coil manokana, indraindray mitentina dolara an'arivony indraindray. Amin'ny tetikasa antonony na avo lenta, ny tombony azo amin'ny fihenan'ny vidin'ny fitsaboana isaky ny ampahany dia mety hanamora ny vidin'ny coil. Amin'ny tranga hafa, ny tombony azo amin'ny injeniera amin'ny fizotrany dia mety be noho ny olana ara-bola. Raha tsy izany, ho an'ny tetikasa ambany dia ambany, ny vidin'ny coil sy ny fitaovana dia matetika no mahatonga ny fizotrany tsy ilaina raha misy coil vaovao tokony hatsangana. Ny ampahany dia tsy maintsy tohanana amin'ny fomba sasany mandritra ny fitsaboana. Ny fihazakazahana eo anelanelan'ny foibe dia fomba iray malaza amin'ny faritra karazana hazo, fa amin'ny tranga maro hafa dia tsy maintsy ampiasaina ny fitaovana manokana.
Likelihood lehibe kokoa amin'ny fametahana raha oharina amin'ny ankamaroan'ny fizotran'ny fitsaboana hafanana
Izany dia vokatry ny hafanana haingana sy ny famonoana olona, ​​ary koa ny fironana hamorona teboka mafana amin'ny endri-javatra / sisiny toy ny: lalambe, lalan-kely, lavaka fiampitana, kofehy.
Fanovana amin'ny fanamafisana ny induction
Ny haavon'ny fanalavirana dia mazàna lehibe kokoa noho ny fizotry ny ion na ny gazy nitrida, noho ny hafanana / famonoana haingana ary ny fanovana martensitika vokatr'izany. Voalaza fa ny fanamafisana ny fampidirana dia mety miteraka fanodikodinana kely kokoa noho ny fitsaboana hafanana mahazatra, indrindra rehefa ampiharina amin'ny faritra voafantina ihany.
Fepetran'ny fitaovana amin'ny fanamafisana ny induction
Koa satria ny dingan'ny fanamafisana Tsy tafiditra ao anatin'ny fiparitahan'ny karbaona na singa hafa mazàna, ny fitaovana dia tsy maintsy misy karbaona ampy miaraka amin'ireo singa hafa mba hanomezana hamafisana ny fanohanana ny fiovan'ny martensitika amin'ny haavon'ny hamafin'ny tadiavina. Midika izany matetika fa ny karbaona dia eo amin'ny 0.40% +, mamokatra hamafin'ny 56 - 65 HRC. Ny fitaovana karbôna ambany kokoa toy ny 8620 dia azo ampiasaina miaraka amin'ny fihenan'ny vokatr'izany hamafisana (40-45 HRC amin'ity tranga ity). Ny vy toy ny 1008, 1010, 12L14, 1117 dia matetika tsy ampiasaina noho ny fitomboan'ny hamafin'ny tratra.
Pitsopitsony momba ny fanamafisana ny fanodinana induction
Induction hardening dia dingana ampiasaina amin'ny fanamafisana ny vy sy ny singa matevina hafa. Ireo ampahany hikolokoloana hafanana dia apetraka ao anaty coil varahina ary avy eo hafanaina ambonin'ny hafanan'ny fanovana azy ireo amin'ny alàlan'ny fampidirana onja mifandimby ny coil. Ny onjam-pifandimbiasana ao amin'ny coil dia miteraka sahan'andriamby mifandimby ao anaty ilay sangan'asa izay mahatonga ny faritra ivelany ho mafana amin'ny hafanana ambonin'ilay faritry ny fanovana.
Ireo singa dia hafanaina amin'ny alàlan'ny sahan'andriamby mifandimby mankany amin'ny maripana ao anatiny na ambonin'ilay elanelam-panovana arahin'ny famonoana eo noho eo. Izy io dia dingan'ny elektromagnetika mampiasa coil inductor varahina, izay fahanana ankehitriny amin'ny haavo sy haavo manokana.
Sokajy FAQ, Technologies Tags mividy milina manamafy, hamafin'ny, fampidirana henjana, hardening surface, mihamafy ny fizotran'ny, induction hardening heating, induction hardening machine, vidin'ny milina fanamafisana, vidin'ny fanamafisana induction, dingan'ny fanamafisana, Toerana mihamafy induction, rafitra fanamafisana, inona no atao hoe mihamafy Post Fikarohana